Thenga I-Multifunctional Keychain Hexagon Coin Outdoor EDC Tool | I-WoopShop®
I-Multifunctional Keychain Hexagon Coin Outdoor EDC Tool
I-Multifunctional Keychain Hexagon Coin Outdoor EDC Tool - Emnyama ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Inombolo yesibonelo: 67845
Kwenziwe ngokwezifiso: yebo
Ukusetshenziswa: Ikhaya le-DIY
Ukusinda Kwe-Tactical Knife: Ukugoqa Okuphathekayo Okuningi
I-Plier Stainless Steel Foldaway: I-Foldway Knife Keychain
Isikulufa Camping Ukusinda: Amathuluzi Travel Kits
Material: 420 insimbi engagqwali + plastic
Usayizi: 4CM × 4CM × 1CM
Izimo Zokusebenzisa: Hlangana nezidingo eziningi zansuku zonke mayelana nommese nesikele - vula ikhathoni ye-amazon, sika intambo encane, njll.
Iphakheji Ihlanganisiwe: I-Multifunctional Hexagon Coin
Imfashini Yesimanje: Le gajethi enamathuluzi amaningi yaklanywa ngendlela ehlukile ye-hexagon ngendlela yesimanjemanje. Iza ifakwe imisebenzi eminingi ukuze ikunikeze ithuluzi le-in-one elitholakala kalula noma nini lapho ungalidinga. Le contraption encane inokuningi okunikezwayo. Kufaka phakathi ummese ogoqayo, ibhande lokusika ibhande lesihlalo esiphuthumayo, isethi ye-screwdriver, ikhadi elimnyama lamathuluzi amaningi elinemisebenzi efana nerula, isikrufu se-hex, isivuli sebhodlela, ifayela, intambo yokusika, nokudonsa izinzipho.
Kulula Ukuthwala: Le hexagon yamathuluzi amaningi ikulungele ukukuphatha njengoba incane ngosayizi ongu-1.5 amayintshi kuphela futhi iza nendandatho yokhiye ozoyinamathisela kusiphathi sakho sokhiye.
Umbono Wesipho Omuhle: Le nsimbi yekhadi lethuluzi le-hexagon yenza isipho esiwusizo nesikhethekile. Isipho esihle kakhulu sabafana, ama-scouts, ubaba, umyeni, isoka, osebenza nabo, nanoma iyiphi indoda empilweni yakho.
Isipho Sosuku Lwezithandani Samadoda: Izipho eziphelele zosuku lwe-valentine kunzima ukuzithola. Lokhu kwenza isipho esijabulisayo sosuku lwe-valentine sikababa, umyeni, umkhulu, indodana, isoka, osebenza naye. Isipho esihle sosuku lwe-valentine sikamyeni.
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-69
kuhle futhi kuhlangene, zonke izingxenye ezihlukanisekayo ziphethwe ngozibuthe akukho neyodwa yazo engawela yodwa
Into iyahambelana, udinga nje ukuhlola konke ukusebenza kwayo, ukuthunyelwa okusheshayo
Izinto ezinhle, i-multitool esebenzayo, ngicabanga ukuthi izongisebenzela kahle kakhulu,